မိုးအေးအေးမှာ ဇိမ်လေးနဲ့သောက်ရမယ့် ကော်ဖီဆိုတာ ဒီလိုဖျော်ရတာပါ - For her Myanmar
ကဲ.. ကဲ… ကော်ဖီသရဲလေးတွေကို မန်းရှင်းခေါ်သွားလိုက်တော့လေ…
ကော်ဖီကြိုက်ကြလား ယောင်းတို့ရေ?? Stella ကတော့ ကော်ဖီကို အရူးအမူးကြိုက်တဲ့ထဲမှာ ပါပါတယ်။ ကော်ဖီကောင်းကောင်းရတဲ့ မေမြို့တို့၊ ကလောတို့များရောက်ရင် အကြိုက်ပဲ။ ကော်ဖီအကောင်းကြိုက်ပေမဲ့ တစ်ခါတလေအပြင်မထွက်နိုင်တော့ အိမ်မှာတင် ကော်ဖီကောင်းကောင်းမွှေးမွှေးလေးတစ်ခွက်ရအောင် တီထွင်ကြံဆရတော့တာပေါ့။
ကော်ဖီကောင်းကောင်းတစ်ခွက်ဖြစ်လာဖို့ ဘာတွေလိုသလဲ ?
အဓိက အရေးကြီးဆုံးကတော့ အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း ကော်ဖီစေ့ပေါ့။ ကော်ဖီစေ့အမျိုးအစားကောင်းမှ အနံ့အရသာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ ကော်ဖီတစ်ခွက်ဖြစ်လာမှာလေ။ ကော်ဖီစေ့ကို ကိုယ်တိုင်ကြိတ်လို့ရသလို အသင့်ကြိတ်ပြီးသား ကော်ဖီမှုန့်လည်း ဝယ်သောက်လို့ ရပါတယ်နော်… ဝယ်တဲ့ ကော်ဖီရဲ့ အရည်အသွေးကိုတော့ ကြည့်ပေါ့ ယောင်းတို့ရယ်.. တချို့ကော်ဖီတွေက နာမည်ကြီးပေမဲ့ တကယ့်တကယ်ကျ ဖွယ်တယ်တယ်ကြီးဖြစ်နေတာမျိုးလည်း ရှိတတ်သေးတာ မဟုတ်လား…
ဒါပေါ့.. အရေးအကြီးဆုံးက ကော်ဖီဆိုပေမဲ့ ဘယ်လိုဖျော်မလဲဆိုတာက ရှိသေးတယ်လေ…
ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ကော်ဖီတစ်ခွက်ရဖို့ ရေအချိုးအဆမှန်အောင်ထည့်ဖို့လိုပါတယ်။ ရေနည်းရင်ခါးသွားနိုင်သလို ရေများရင်လည်း အရသာမရှိ ကျဲတောက်ကြီးဖြစ်နေမှာပါ။ လုံးဝ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ကော်ဖီကောင်းကောင်းတစ်ခွက်ကို ရစေမယ့် ရွှေအချိုးကတော့ မတ်ခွက်ကြီးနှစ်ခွက်စာဖျော်မယ်ဆိုရင် ကော်ဖီမှုန့်စားပွဲတင်ဇွန်း (၅) ဇွန်းစာနဲ့ ရေ (၁၆) အောင်စကို ဆတူရောရပါမယ်တဲ့ ယောင်းတို့ရေ… ပြီးရင်တော့ သုံးမိနစ်ကနေ ငါးမိနစ်လောက်နှပ်ထားဖို့လိုပါတယ်။
ကော်ဖီထဲ ရေနွေးရောတာလည်း လွယ်တယ်မထင်နဲ့နော်.. ပညာပါတယ်ရယ်… ရေနွေးဆူတာနဲ့ ချက်ချင်းလောင်းထည့်လိုက်လို့ မရဘူး…ဟွန်းဟွန်း…
ရေနွေးဆူပြီးရင် ဆယ်စက္ကန့်လောက် အနည်ထိုင်အောင် အရင်ဆုံး စောင့်ပေးပါ။
ခွက်ထဲထည့်တဲ့အခါမှာ နည်းနည်းချင်း စက်ဝိုင်းပုံလောင်းထည့်ပါ။
ခွက်ရဲ့ လေးပုံတစ်ပုံလောက်ရောက်ရင် စက္ကန့် (၃၀)လောက် အမြှုပ်ငြိမ်သွားတဲ့အထိ စောင့်ပါ။ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ပမာဏရတဲ့အထိ အဲ့အတိုင်းဆက်လုပ်ပေးနော်..
ဒီအဆင့်တွေပြီးသွားရင်တော့ နို့တို့၊ သကြားတို့ကို ကိုယ်လိုသလောက်ထည့်ပြီး ကော်ဖီကောင်းကောင်းလေးတစ်ခွက် ဖန်တီးနိုင်ပါပြီရှင်။
Stella အတွက်ကတော့ နို့များများလေးနဲ့ ဆိမ့်ဆိမ့်လေးသောက်လိုက်ရရင် ဆွေမျိုးမေ့ပဲ။ ယောင်းတို့ရော … ?
ကဲ.. ကဲ… ကျောဖီသရဲလေးတှကေို မနျးရှငျးချေါသှားလိုကျတော့လေ…
ကျောဖီကွိုကျကွလား ယောငျးတို့ရေ?? Stella ကတော့ ကျောဖီကို အရူးအမူးကွိုကျတဲ့ထဲမှာ ပါပါတယျ။ ကျောဖီကောငျးကောငျးရတဲ့ မမွေို့တို့၊ ကလောတို့မြားရောကျရငျ အကွိုကျပဲ။ ကျောဖီအကောငျးကွိုကျပမေဲ့ တဈခါတလအေပွငျမထှကျနိုငျတော့ အိမျမှာတငျ ကျောဖီကောငျးကောငျးမှေးမှေးလေးတဈခှကျရအောငျ တီထှငျကွံဆရတော့တာပေါ့။
ကျောဖီကောငျးကောငျးတဈခှကျဖွဈလာဖို့ ဘာတှလေိုသလဲ ?
အဓိက အရေးကွီးဆုံးကတော့ အားလုံးသိကွတဲ့အတိုငျး ကျောဖီစပေ့ေါ့။ ကျောဖီစအေ့မြိုးအစားကောငျးမှ အနံ့အရသာနဲ့ပွညျ့စုံတဲ့ ကျောဖီတဈခှကျဖွဈလာမှာလေ။ ကျောဖီစကေို့ ကိုယျတိုငျကွိတျလို့ရသလို အသငျ့ကွိတျပွီးသား ကျောဖီမှုနျ့လညျး ဝယျသောကျလို့ ရပါတယျနျော… ဝယျတဲ့ ကျောဖီရဲ့ အရညျအသှေးကိုတော့ ကွညျ့ပေါ့ ယောငျးတို့ရယျ.. တခြို့ကျောဖီတှကေ နာမညျကွီးပမေဲ့ တကယျ့တကယျကြ ဖှယျတယျတယျကွီးဖွဈနတောမြိုးလညျး ရှိတတျသေးတာ မဟုတျလား…
ဒါပေါ့.. အရေးအကွီးဆုံးက ကျောဖီဆိုပမေဲ့ ဘယျလိုဖြျောမလဲဆိုတာက ရှိသေးတယျလေ…
ပွီးပွညျ့စုံတဲ့ ကျောဖီတဈခှကျရဖို့ ရအေခြိုးအဆမှနျအောငျထညျ့ဖို့လိုပါတယျ။ ရနေညျးရငျခါးသှားနိုငျသလို ရမြေားရငျလညျး အရသာမရှိ ကြဲတောကျကွီးဖွဈနမှောပါ။ လုံးဝ ပွီးပွညျ့စုံတဲ့ ကျောဖီကောငျးကောငျးတဈခှကျကို ရစမေယျ့ ရှအေခြိုးကတော့ မတျခှကျကွီးနှဈခှကျစာဖြျောမယျဆိုရငျ ကျောဖီမှုနျ့စားပှဲတငျဇှနျး (၅) ဇှနျးစာနဲ့ ရေ (၁၆) အောငျစကို ဆတူရောရပါမယျတဲ့ ယောငျးတို့ရေ… ပွီးရငျတော့ သုံးမိနဈကနေ ငါးမိနဈလောကျနှပျထားဖို့လိုပါတယျ။
ကျောဖီထဲ ရနှေေးရောတာလညျး လှယျတယျမထငျနဲ့နျော.. ပညာပါတယျရယျ… ရနှေေးဆူတာနဲ့ ခကျြခငျြးလောငျးထညျ့လိုကျလို့ မရဘူး…ဟှနျးဟှနျး…
ရနှေေးဆူပွီးရငျ ဆယျစက်ကနျ့လောကျ အနညျထိုငျအောငျ အရငျဆုံး စောငျ့ပေးပါ။
ခှကျထဲထညျ့တဲ့အခါမှာ နညျးနညျးခငျြး စကျဝိုငျးပုံလောငျးထညျ့ပါ။
ခှကျရဲ့ လေးပုံတဈပုံလောကျရောကျရငျ စက်ကနျ့ (၃၀)လောကျ အမွှုပျငွိမျသှားတဲ့အထိ စောငျ့ပါ။ ကိုယျလိုခငျြတဲ့ ပမာဏရတဲ့အထိ အဲ့အတိုငျးဆကျလုပျပေးနျော..
ဒီအဆငျ့တှပွေီးသှားရငျတော့ နို့တို့၊ သကွားတို့ကို ကိုယျလိုသလောကျထညျ့ပွီး ကျောဖီကောငျးကောငျးလေးတဈခှကျ ဖနျတီးနိုငျပါပွီရှငျ။
Stella အတှကျကတော့ နို့မြားမြားလေးနဲ့ ဆိမျ့ဆိမျ့လေးသောကျလိုကျရရငျ ဆှမြေိုးမပေဲ့။ ယောငျးတို့ရော … ?
Tags: brew, Coffee, coffee beans, Food